Ajuju Ajuju - Muta ahia 2
Q1. Gịnị bụ Mụta 2 Trade?
Mụọ 2 Trade bụ ebe mmụta maka ndị ahịa na-elekwasị anya n'inye ha nyocha ahịa ahịa azụmaahịa dị elu, ntuziaka zuru ezu yana mmelite ahịa dị ndụ.
Anyị na-elekwasị anya na ngwaahịa, indices, cryptocurrencies, yana n'ezie, ịzụ ahịa azụmaahịa. Mụta ahia 2 na-enyekwa ezigbo oge trading n'ókè maka klaasị ndị a.
E wezụga akara ngosi azụmaahịa anyị nwere ntụkwasị obi, anyị na-etu ọnụ maka ihe ọmụma miri emi maka ndị ahịa ụdị niile, nke gụnyere ọtụtụ usoro atụmatụ azụmaahịa, usoro ịzụ ahịa azụmaahịa kachasị mma ị nwere ike ịchọta ebe ahụ, yana Ebe anyị hụrụ n'anya nke ukwuu.
Q2. Kedu ngwa ọrụ mmụta Mụta 2 Trade nyere iji nyere aka melite azụmaahịa m?
Mụọ otu ndị ahịa azụmaahịa ọkachamara na ndị nyocha jikọtara nka ahịa ha iji wetara gị uru ndị a:
Live mmelite na-ekpuchi oge azụmahịa zuru ụwa ọnụ na elekere.
Top free- na adịchaghị Forex, ngwongwo, ngwaahịa ndeksi, na cryptocurrency trading n'ókè.
Ọtụtụ usoro ahia ahia.
'Ebe a na-amụ ihe' dị ike nke nwere ọtụtụ echiche azụmaahịa na ozi na-ekpuchi akụrụngwa ego dị iche iche, nyiwe azụmaahịa, nhọrọ itinye ego, ndị na-ere ahịa Forex, ndụmọdụ azụmaahịa azụmaahịa, wdg.
Ihe Mụta 2 Trade Forex trading N'ezie.
Q3. Enwere m ike iji Mụta Ihe ngosi azụmahịa nke 2 Trade na atụmatụ Forex trading maka n'efu?
Eeh. Ị nwere ike. Iji jiri akara ngosi ahia anyị na-aga n'ihu na-aga na akara ngosi akara ngosi anyị na ebe ị ga-ahụ nkọwa nke akara ngosi oge dị mkpirikpi na ogologo oge na akara ngosi. Anyị nwekwara a adịchaghị Forex n'ókè ọrụ nke na-enye ndị ọzọ uru na-agụnye email na mobile alerts maka trading n'ókè.
Mụọ 2 ahia azụmaahịa azụmaahịa enwere ike iji n'efu. Gaa na njikọ dị n'elu iji chọta ọtụtụ usoro azụmaahịa gụnyere isi, teknụzụ, na atụmatụ azụmaahịa ama ama.
Q4. Achọrọ m ụdị mmụta mmụta ọ bụla ma ọ bụ ahụmịhe azụmaahịa azụmaahịa iji jiri mmụta mmụta 2 Mụta azụmaahịa wee bụrụ onye ahịa Forex na-emeri?
Chọghị iru eru ọ bụla ma ọ bụ ahụmịhe azụmaahịa ọhụụ iji nwee ọ enjoyụ na akụnụba nke mmụta azụmaahịa na azụmaahịa na weebụsaịtị Mụta 2 Trade. Na mbụ ị malitere, n'oge na-adịghị anya ị nwere ike ịghọ onye ahịa azụmaahịa na-aga nke ọma ma baa uru.
Ọbụlagodi na ị maghị ihe ọ bụla gbasara azụmaahịa azụmaahịa, ị nwere ike itinye aka na ahịa a dị ịtụnanya. Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa na-enweghị uche nwere ike ịgbaso akara ngosi azụmaahịa anyị na-enweghị atụ na-enweghị nchegbu gbasara nyocha teknụzụ ma ọ bụ oge ahịa. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji ahụmịhe nke ndị ahịa na ndị nyocha anyị nwere oge mgbe ị na-amụta nkọwa nke azụmaahịa azụmaahịa onwe gị.
Q5. Ọ ga-amasị m ịmalite azụmaahịa Forex ma jiri akara azụmaahịa gị. Ebee ka m ga-amalite?
Nwere ike ịmalite ịzụ ahịa n'oge na-adịghị anya site na ịme usoro ndị a:
Mepee akaụntụ azụmaahịa Forex na otu nke anyị Ndị na-ere ahịa Forex akwadoro.
Tinye ego mbu gi n’ime ahia ahia a.
gaa na anyị Forex n'ókè peeji ma detuo akara ahia n'ime akaụntụ ahia gi.
Q6. Ọ ga-amasị m ịbụ onye ahịa azụmaahịa ọkachamara. Kedụ ka ndị mmụta Learn 2 Trade 'Trading Guide maka Ego Na-eme Ego' ga - enyere m aka ịbụ onye ahịa FX pro?
Nke a dị ike Forex trading N'ezie nke a na-enye site na Mụta 2 Trade nwere ihe karịrị isi iri nke ozi ahia ahia, nke na-ekpuchi ọtụtụ isiokwu.
N'ime ntuziaka a, ị ga-amụta usoro okwu mmalite nke Forex, na etu esi etinye nyocha na nyocha, otu esi eji ụdị ọrụ ọrụ ọ bụla, otu esi achọpụta n'etiti usoro ahịa dị iche iche, otu esi etinye Elliot Wave theory, na ọtụtụ ndị ọzọ! Ga-ahụ ihe niile ịchọrọ iji bụrụ ọkachamara azụmaahịa ọkachamara na ntuziaka azụmaahịa anyị na-atụ egwu.
Q7. Achọrọ m ịmalite ahia Forex na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka ngwaahịa, indices, na cryptocurrencies. M nwekwara mmasị na-elekọta mmadụ / oyiri ahia. Biko ị nwere ike inyere m aka ịchọta onye na-azụ ahịa a pụrụ ịdabere na ya?
Kpamkpam. Nduzi ndi n’achọ ahia n’inweta onye ahia ahia nke kachasi nma diri ha bu ihe omuma. Anyị maara na ọ dị oke mkpa ijikọ aka na onye na-atụkwasị obi na-atụkwasị obi bụ onye na-enye ogbugbu ahia a pụrụ ịdabere na ya yana usoro ịzụ ahịa dị mfe iji na ngwaọrụ ahịa dị mma.
Iji chọta ezigbo onye na-ere ahịa maka mkpa ịchọrọ gị, lee anya na ndị na-ere ahịa anyị na-atụ aro ebe ị ga-ahụ ndị na-ere ahịa azụmaahịa pụrụ iche ndị na-enye mgbasa mgbasa ozi na ngwa ahịa, ego, indices na cryptocurrencies. Offọdụ n'ime ndị na-ere ahịa a, dịka ọmụmaatụ eToro, na-akwadokwa ahia mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Q8. Enweela m akaụntụ ahịa azụmaahịa. Kedu otu m ga - esi mee ọtụtụ ihe na ọrụ dị na Mụta 2 Trade?
Mụọ 2 Trade's adịchaghị trading n'ókè bụ ụzọ dị mma iji malite iji ihe niile anyị nwere inye onyinye. Ihe ngosi akara ngosi anyị na-enye nnukwu uru nke ịbute gị site na email na ozi ịntanetị. Site na i copomi Mụta 2 Trade si n'ókè nke azụmahịa gị na akaụntụ ahịa gị, ị nwere ike irite uru site na ịzụ ahịa ego dị iche iche, ma ị bụ onye mbido ma ọ bụ onye ahịa nwere ahụmahụ. Mee ka ndi okacha amara ahia anyi na ndi nyocha nyocha ahia bara uru diri gi!
N'ezie, anyị nwere kwa ụbọchị Forex ozi ọma ma na-ebi ndụ mmelite ahịa site n'aka otu ìgwè ndị ọkachamara na-enyocha ihe. Ghara ichefu ihe mmụta niile anyị nwere na weebụsaịtị anyị iji mee ka ị bụrụ onye ahịa kacha mma.
Q9. Amaghị m nke ị ga-eji azụmaahịa azụmaahịa mbụ m kwesịrị iji. Have nwere ezigbo ozi iji nyere m aka ịhọrọ usoro azụmaahịa ziri ezi?
Ee, anyị nwere! Ihe niile nke anyị akwado Broka enye ezigbo nyiwe ahia. Iji nwalee nyiwe ndị a na-enweghị nkwa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, naanị mepee akaụntụ ngosi na ndị ị masịrị. Ma ị chọrọ a ọkọlọtọ MT4 n'elu ikpo okwu ma ọ bụ onye na-elekọta mmadụ trading n'elu ikpo okwu, anyị nwere niile ozi na ị chọrọ.
Maka ozi zuru ezu banyere usoro mgbasa ozi azụmaahịa a pụrụ ịdabere na ya, lelee nke anyị Ngwongwo ahia ahia kacha mma Peeji ugbu a!
Q10. Kedu ihe Mụta 2 Trade's trading signals?
Mụọ 2 Azụmahịa nwere otu ndị ahịa nwere ọkaibe ọkachamara bụ ndị ọkachamara n’ahịa na-enyocha ihe. Ndị ahịa a nọgidere na-enyocha Forex, ngwaahịa, na ahịa ndị ọzọ iji chọta ohere ịzụ ahịa kachasị mma maka gị!
Mgbe ndị nyocha anyị hụrụ ohere ahia dị oke mma, ha na-etinye echiche azụmaahịa n'ụdị akara ngosi azụmaahịa na ogologo oge (ihe ngosi azụmaahịa) na anyị Forex n'ókè ọnụ. Ndị a trading n'ókè na-gwa na nkọwa dị ka na-uru na nkwụsị-ọnwụ kwa ma enwere ike i coomi gi n'ime ahia ahia gi.
Q11. Kedu ka m ga - esi jiri Mụta Ihe ahia azụmaahịa Mụta 2 Trade?
Iji Mụta Ihe ngosi ahia nke 2 Trade dị mfe. Naanị ịgbaso akara ngosi azụmaahịa dịka ha si apụta na akara ngosi na nke anyị Forex n'ókè na peeji nke ma detuo akara ngosi ahia 'nkwụsị (kwụsị ọnwụ ma nweta iwu uru) n'ime akaụntụ azụmaahịa gị. Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere otu esi eji akara ahịa anyị bara uru.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịzụrụ Ọ bụrụ na ịchọrọ ka amara gị ọkwa oge ọ bụla akara ngosi azụmaahịa ọhụụ pụtara na akara ngosi akara ngosi anyị, denye aha na anyị akara ngosi Forex ọrụ ugbu a!
Q12. Kedu otu esi amụta Mkpebi azụmaahịa nke Mụta 2 Trade?
Otu ndi oru nyocha na ndi okacha amara ahia na Muta 2 ahia na-agbaso ahia ego na elekere, ubochi ise n'izu, na acho ohere ahia di egwu iji nweta uru. Site na iji nyocha teknụzụ na nke nkenke, ndị nyocha anyị na-agbasi mbọ ike iji nye ndị ọrụ anyị akara ngosi azụmaahịa dị elu.
Q13. Kedu ihe m ga - eme iji mezue ahụmịhe nke iji akara azụmaahịa gị? (Enwere ihe ọ bụla m kwesịrị ịmụta iji nyere m aka iji akara gị rụọ ọrụ nke ọma?)
Ọ na-ukwuu tụrụ aro ka ọ dịkarịa ala na-amụta ihe ndị bụ isi nke Forex trading. Mgbe ị na-eji Mụta 2 Trade's trading signals, enwere usoro njikwa ihe egwu dị mkpa ịchọrọ iji mejuputa iji chekwaa isi ego gị. Ezigbo ihe atụ nke ihe a ga - eme ka ị belata ikike ị ga - eji na akara azụmaahịa anyị.
Ọzọkwa, nghọta dị nkenke banyere okwu azụmaahịa azụmaahịa, igbu azụmaahịa na njikwa, yana nyocha ọrụ nyocha na isi ihe. You marala usoro azụmaahịa ndị a: pip, leverage, kwụsị ọnwụ, nweta uru, isi ego abụọ, ogologo, mkpụmkpụ, omume, wdg. Iji mụta ihe ndị a, yana ọtụtụ echiche ndị ọzọ dị mfe na nke dị elu, gaa na Mụta 2 Trade Learn Center taa.
Q14. Gịnị bụ mmekọrịta azụmahịa?
Tradingzụ ahịa na-ewere ọnọdụ na nyiwe azụmaahịa nke oge a n'ịntanetị nke na-akwado ma ịzụ ahịa na mmekọrịta mmekọrịta (nke metụtara azụmahịa / ozi ahịa) n'etiti ndị ọrụ dị iche iche nke nyiwe azụmaahịa ndị a.
Na nyiwe ahia mmadu, dika eToro, Azụmahịa echiche na nkọwa nwere ike ịkekọrịta n’enweghị nsogbu n’etiti ndị otu. Ndị na-achụ ego na ndị ahịa nwekwara ike na-akpaghị aka na-e copyomi trades nke ndị ama ama amaara ego na akaụntụ ha na-azụ ahịa site na ịkewa ego ndị isi obodo ha na ndị a.
Q15. Kedụ ka m ga - esi tinye aka na azụmaahịa ma ọ bụ itinye ego na azụmaahịa azụmaahịa, ngwa ahịa, na ngwa ahịa? (Kedu ụzọ dị iche iche esi enweta ego site na klas ndị a?)
Ndị a bụ ụzọ ndị kachasị ewu ewu iji gbochie Forex, commodities, and stock indices:
Na-ere ndụ trading n'ókè / trading alerts.
Mụọ ịzụ ngwá ọrụ ndị a n'onwe gị.
Omenala / oyiri ahia - detuo ahia ndi ahia ahia na aka ahia gi.
Q16. Kedu ụdị nsonaazụ Mụta 2 Trade enwetala site na akara ngosi azụmaahịa ha?
Otu anyị nke ndị ahịa azụmaahịa na ndị nyocha na-adọpụ ọtụtụ puku pipụ n'ahịa ndị ahụ kemgbe ha malitere ọrụ mgbaàmà ahịa anyị. Dịka ọmụmaatụ, na 2016, anyị butere pips 4907 dị ịtụnanya wee baa uru 11 n'ime ọnwa 12. Lelee Mụta ahia 2 Ihe ngosi 2018 na-egosi ebe a.
Q17. Kedụ ka m ga - esi jikwaa ihe egwu dị na azụmaahịa Forex
Otu n'ime ụzọ kachasị ike iji belata ihe egwu dị na azụmaahịa azụmaahịa bụ iji kwadebe onwe gị na agụmakwụkwọ azụmaahịa azụmaahịa. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị bu n'uche, ị nọ na ebe kwesịrị ekwesị. Mụọ 2 Trade's Learn Center na-enweta ozi bara uru gbasara azụmaahịa na itinye ego na azụmaahịa. Nke a gụnyere usoro azụmaahịa anyị, ọdịmma azụmaahịa Forex, atụmatụ azụmaahịa Forex, njikwa ihe egwu Forex, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Zọ ọzọ dị ike iji gbochie ọtụtụ ihe egwu dị na azụmaahịa azụmaahịa bụ ịgbaso ma detuo ndị ahịa nwere ahụmahụ. Ma ọ na-etinye Mụta 2 Trade's forex trading signals ma ọ bụ iyingomi ndị na-ewu ewu na-ewu ewu (ndị ahịa depụtaghachiri) na nyiwe ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-erite uru nke ndị ahịa siri ike na-enye ọtụtụ uru.
Q18. Ego ole ka m nwere ike ịme site na azụmaahịa Forex, ngwaahịa ngwaahịa, na ngwaahịa?
Eluigwe bụ oke! Ahịa ndị a na-enye akụrụngwa mmiri dị ukwuu nke na-ere ahịa na nnukwu mpịakọta. Nke a na - eme ka ndị ahịa nwee ike ịme nnukwu ọnọdụ azụmahịa na obere iwepụ ma ọ bụ enweghị. Nke a bụ ezigbo uru na-enye ohere ka ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-ewu azụmaahịa dị n'ịntanetị dị egwu nke nwere ike ghara ịhapụ ndị zụrụ na ndị na-ere ahịa.
N'ezie, iji nweta ego na azụmaahịa, ngwa ahịa, na ahịa ndị ọzọ chọrọ mkpebi siri ike na agụmakwụkwọ azụmaahịa kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ị ga-azụ ahịa niile n'onwe gị (idetuo azụmaahịa na ịgbaso Mgbakọ 2 Trade trading is less less intensive). Ọ bụrụ n’ị na-achọ agụmakwụkwọ dị elu nke klaasị, ebe dị mma ịmalite bụ Ebe Mụta Ihe.
Q19. Enweghị m ike iji ọtụtụ awa na-ekiri chaatị dị iche iche kwa ụbọchị. Enwere ike ahia Forex na obere oge dị?
Ọ bụ n'ezie! Ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa na-aga nke ọma na-azụ ahịa ụbọchị, ma ọ bụ azụmaahịa ogologo oge, nke anaghị achọ oge dị ukwuu ma ọlị. Ọbụna na ọrụ 8-5, ị ka nwere ike nweta nnukwu nsonaazụ azụmaahịa FX n'ụzọ dị otú a.
N'ezie, enwere ụzọ ndị ọzọ iji zụọ ahịa Forex ma ọ bụrụ na oge gị dị oke oke. Otu n'ime ụzọ ndị a bụ iji nke anyị akara ngosi Forex. Wayzọ ọzọ bụ itinye aka na azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka eToro.
Site na ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe, a na-e coomi ahịa ahịa nke ndị ahịa nwere akpaghị aka na akaụntụ azụmaahịa gị. Nke a na-echekwa gị oge dị ukwuu n'ihi na ịkwesighi ileba anya na chaatị ma ọ bụ nyocha ahịa ma ọlị!
Q20. O kwere omume ịmalite ahia Forex na obere obere ego ma ọ bụ ikekwe na akaụntụ omume?
Ee, ọ bụ. Nwere ike ịmalite ịzụ ahịa Forex na obere $ 100. Nweta nke leverage na-enyere obere ahịa imeghe a Micro otutu (1000 nke a ego ụzọ) Forex ahịa na-erughị $ 15. Nke a dabere na ọnụọgụ ego nke onye na-ere ahịa gị na-enye, n'ezie.
Ndị ahịa mbụ chọrọ ịmata onwe ha na ahịa FX tupu ha etinye isi obodo ha n'ihe ize ndụ, nwere ike mepee akaụntụ nnabata n'efu yana otu n'ime ndụmọdụ anyị. Forex ndị na-ere ahịa na-eme FX trading na mebere ego.
Q21. Kedu ihe bụ leverage yana olee otu ọ ga-esi emetụta uru m ma ọ bụ mfu m na azụmaahịa azụmaahịa mbụ?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, iji ntinye ego na azụmaahịa mbu pụtara na nnukwu ọnọdụ azụmaahịa nwere ike ijikwa obere ego. Dịka ọmụmaatụ, ya na ụfọdụ Forex ndị na-ere ahịa onye na-enye 1: 500 leverage, ị nwere ike zụta ma ọ bụ ree nkeji 1000 nke ụzọ ego USD / JPY na 'nkwụnye ego' nke $ 2. Echiche ahia ahia nke 1K USD / JPY ọnọdụ bụ 1000 dollar.
Ọ pụtara na na 1: 500 leverage, ị naanị mkpa $ 2 na- -emeghe ọkwá ruru $ 1000. $ 998 fọdụrụ na-agbaziri site na Forex ore. N'ezie, a ozu ahia ga-mkpa karịa $ 2 na- nọgide na-enwe ọnọdụ a ozugbo emepere ya. Iji ntinye ego na azụmaahịa azụmaahịa nwere ikike ịbawanye uru na ọghọm. Ojiji nke leverage dị oke mkpa bụ isi ihe kpatara ịmalite ndị ahịa ji efunahụ ego na ahịa FX.
Q22. Kedu uru nke azụmaahịa azụmaahịa n'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba?
Tradersfọdụ ndị ahịa na-achọ obere (ire) ebuka mgbe nsogbu na-ada n'ahịa ahịa. Ọ bụ ezie na nke a dị ka ezi echiche, ọ na-ebu ihe ize ndụ karịa ịzụrụ (na-aga ogologo) ebuka. Nke a bụ n'ihi na ịkwụ ụgwọ kachasị na azụmaahịa mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ bụ 100%, nke na-eme mgbe ọnụahịa ya dara na efu. N'aka nke ọzọ, ọghọm enwere ike ịre ahịa dị mkpụmkpụ bụ enweghị oke.
N'adịghị ka nke a, ma ọ bụrụ na onye ahịa na-aga ogologo (zụta) ma ọ bụ obere (ọ na-ere) otu ụzọ ego, ọnwụ kachasị na akụkụ abụọ bụ 100%, ebe uru kachasị bụ na-akparaghị ókè. Yabụ, ma ị na-azụ ma ọ bụ na-ere otu ụzọ ego, ị gaghị eche ihu 'enweghị nraranye' nke ihe ọghọm-metụtara na mkpụmkpụ ebuka. Nke a na - eme ka azụmaahịa azụmaahịa na - agbanwe ma na - adịkarị egwu karịa azụmaahịa azụmaahịa n'oge ahịa ahịa nwere ihe egwu. Uru ọzọ dị na azụmaahịa dị na ahịa Forex bụ nnukwu liquidity ọ na-enye, karịsịa na isi ego ụzọ abụọ.
Q23. Kedu ka ego dijitalụ si agbanwe?
Ego dijitalụ, ma ọ bụ nke mkpuchi, na-agbanwe nke ukwuu. Ọ bụ ezie na Forex na-agbanwe agbanwe, cryptocurrencies dị karịa. Isi ego anaghị adịkarị agafe karịa 5 pasent n'otu ụbọchị. Otú ọ dị, Cryptocurrencies na-ebugharị ihe karịrị pasent 10 n'otu ụbọchị. Nke anyi Ego kachasị mma iji tinye ego na 2019 na nso nso a nwetara ihe karịrị 70% n'otu ụbọchị.
Q24. Kedu ụgwọ m kwesịrị iji zụọ ahịa cryptocurrencies?
Nchekwa, nke a makwaara dị ka ego dijitalụ, na-agbanwe agbanwe, ya mere, a ghaghị ịgbanwe ihe ahụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-eji leverage x10 na azụmaahịa gị Forex, mgbe ahụ maka azụmaahịa cryptocurrency ị ga-ehichapụ leverage ahụ site na oge 8-10 dị ka ahịa crypto dị okpukpu 10 karịa nke na-agbanwe agbanwe. Nke a pụtara na ị kwesịrị ịzụ ahịa na enweghị ego ọ bụla.
Ọ bụrụ na ntụgharị ahụ eburu n'ihu, ị kwesịrị ịbelata ikike gị karịa - nwee ọnọdụ pere mpe. Echegbula onwe gị banyere inweta ezi uru, enwere ọtụtụ pips a ga-eme n'ahịa a.
Q25. Kedu oge azụmaahịa nke ahịa cryptocurrency?
Ahịa crypto bụ ahịa 24/7. Ahịa Forex, n'aka nke ọzọ, bụ ahịa 24/5, mepee site n'ụtụtụ Mọnde na Eshia ruo mgbede Fraịde na US
Q26. Kedu ohere ndị ụbọchị na -amụta ndị na-enyocha ahia 2 na-enye?
Mụta ahia 2 na-enye ohere azụmaahịa kwa ụbọchị na Forex, ngwaahịa, indices na cryptocurrencies. Mpaghara nka nka gunyere; ezigbo oge Forex, Mmelite ahịa na-ebi ndụ 24/7, echiche ahia, na nyocha ahịa.
Q27. Usoro mgbaàmà gị ọ bụ akpaghị aka ka ị na-eji aka iji aka gị emepụta akara?
Mụọ ihe ngosi ahia nke 2 na-enye ndụ site n'aka ndị ọkachamara anyị. Onye isi nke Skerdian Meta na-eduzi, otu ndị ọkachamara anyị bụ ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na ndị ahịa na-enyocha ahịa ma na-enye nyocha ahịa nke oge a, echiche ahia, na akara ngosi azụmahịa. Ndị nyocha anyị na-ekpuchi ahịa azụmaahịa yana cryptocurrencies, indices na commodities.
Q28. You na-azụ ahịa Aussie (Dollar Australia) na Kiwi (Dollar New Zealand)?
Anyị na-ere ahịa ego niile, ọkachasị na dollar US. Ka emechara, AUD / USD na NZD / USD bụ Forex majors. Ọ na-amasị anyị ịzụ ahịa ha ma mepee ọtụtụ azụmahịa na ha n'ihi na ọ na-adị mfe mgbe ụfọdụ ịkọ amụma.
Q29. Kedu nke bụ akara ngosi ka mma, Mbepu Ike Ebube (RSI) ma ọ bụ stochastics?
Onweghị ihe dị ka ihe ngosi ka mma. E nwere ọtụtụ ihe ngosipụta aka ọrụ, ọ dịkarịa ala 10 n'ime ha dị mma iji nyocha maka nyocha teknụzụ gụnyere RSI na stochastics. Anyị na-arụ ọrụ na akara ngosi RSI, dịka anyị na-ejikarị ya mana nke a ekwesịghị iwepụ ihe na-esi ike.
Q30. Kedụ ka ị ga - esi zụọ ahịa EUR / USD? Kedu usoro ị ga-eji? You ga-azụta ma ọ bụ ree ya?
Anyị na-eji usoro abụọ na usoro eji eme ihe mgbe anyị na-azụ ahịa ụzọ abụọ. EUR / USD bụ isi ụzọ na ọ na-emetụta nke ọma na isi na ọrụaka ihe. Yabụ, anyị na-ejikọ ọnụ ọgụgụ nke teknụzụ na njirimara dị mkpa site na usoro nke usoro iji nye akara ngosi kachasị mma maka ụzọ a.
Q31. Kedu ụzọ ị chere na Dollar US ga-aga n'ime izu ole na ole sochirinụ?
Onweghi ihe 100% doro anya na Forex, ọ bụ ya mere o ji bụrụ azụmahịa siri ike. Mana uru ga-aba ma ọ bụrụ na ịmara etu esi enyocha ahịa.
Mgbe ị na-elele oge dị ogologo, dị ka eserese kwa ụbọchị na kwa izu, US Dollar na-agbada ala karịa ọtụtụ ndị ibe ya. N'ihi ya, Index nke Dollar US nọ n'ọnọdụ dara ada.
Ọ bụrụhaala na ndepụta a ka nọ n'okpuru ụfọdụ ọnụọgụ dị mkpa (dịka ụbọchị 200 na-agagharị), ọ nweghị ihe kpatara ịlụ ọgụ na-agbadata ala. Agbajikwa ọkwa nkwado dị mkpa na Index Dollar US na mbubreyo na 2017 ma otu ọkwa a nwere ike rụọ ọrụ dịka nkwụsi ike n'ọdịnihu dị nso.
Marketzọ ahịa ahịa kachasị maka dollar dị ala ma yabụ anyị nọrọ na ntagide na-abanye na 2018.
Q32. Kedu ụzọ kachasị mma iji zụọ ahịa Bitcoin?
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ cryptocurrencies, Bitcoin anọwo na-eme ihe na-eme ogologo oge kemgbe ọ malitere. Omume a na-esiwanye ike, yabụ ụzọ ahia Bitcoin bụ ịga ogologo oge (ịzụta) yana obere ntinye. A na-atụ aro ya mgbe niile ichere maka ezigbo ndọghachi ma naanị mepee ọnọdụ. Na Bitcoin, a Buy na jide obibia nwere ike na-akpali.
Q33. Gịnị bụ ngọngọ? Kedu ka o si arụ ọrụ na gịnị kpatara o ji dị mkpa maka cryptocurrencies?
A blockchain bu akwukwo ndi mmadu kesara nke oma nke na-edekọ ahia na uzo di iche. A na-emelite akwụkwọ ndekọ na ezigbo oge, ndị ọzọ niile nwere otu akwụkwọ a. Mmekọrịta Cryptocurrency na-agbakorita na blocks ma tinye ya na blockchain n'usoro oge. Enweghi ike igbanwe ndenye aha n'ime akwukwo a na-egbochi iweghachite n'ihi na o gha achota uzo nile a ga-agbanwe ma choro mmekorita nke ndi ozo di na ntaneti.
N'iburu akụkụ ndị a n'uche, blockchain technology bụ ezigbo ihe ngwọta iji kwado nhazi, ọgbọ na ọgbọ nke ọtụtụ cryptocurrencies, gụnyere bitcoin.
Q34. Kedu ụzọ kachasị mma maka ahia cryptocurrencies? Kedu atụmatụ ị ga-akwado?
N'ihi uptrend dị ike nke ndị ama ama ama ama na-achọta onwe ha, a zụta-na-jide obibia emeela ka ọtụtụ usoro ahia ndị ọzọ karịa.
Mgbe ị na-etinye njikwa ego na-agbanwe agbanwe, atụmatụ 'ịzụta na njide' atụmatụ azụmaahịa / itinye ego bụ nhọrọ dị mma n'ihi ịdị mfe ya na arụmọrụ ya. Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na azụmaahịa a na-atụghị anya ya bụ nhọrọ kachasị nchebe gị.
Q35. Enwere ike inomi ahịa cryptocurrencies? Makwaara banyere ezigbo onye na-elekọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya?
Kpamkpam! Dika ihe ahia ndi ozo ndi ahia di iche iche nwere ike i copyomi. Lelee nke anyi anya Nyochaa eToro cryptocurrency.. eToro bụ onye na-azụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ụwa kacha ukwuu ma na-enye 7 cryptocurrencies dị iche iche ugbu a ma na-enye gị ohere idetuo ọtụtụ azụmaahịa ndị na-ewu ewu 'crypto (na ndị ọzọ) n'efu.
Q36. Ọ ga - ekwe omume ịnweta ozi sitere n'aka gị mgbe ị na - enye akara ngosi azụmaahịa?
Eeh. Iji Mụta ahia 2 adịchaghị n'ókè akaụntụ, ị na-enweta ụda ozugbo, mkpanaka, na ozi email iji hụ na ị gaghị echefu ahịa ọzọ.